ब्ल्याकमेलिङ : साइबर अपराध अब अदालतमा
मुलुकमा साइबर अपराधसम्बन्धी कानुन निर्माण भएपछि उक्त कानुनलाई टेकेर न्यायालयसमक्ष पुगेको वीरगन्जको एउटा मुद्दा अहिले चर्चाको बिषय बनेको छ । साइबर अपराधका आरोपी एक युवक भदौ २३ गते पर्सा जिल्ला अदालतमा १ लाख ३० हजार रुपैयाँ धरौटी राखेर सामान्य तारेखमा छुटेका छन् । मुलुककै नौलो खालको तथा सम्भवतः पहिलो यो मुद्दाका आरोपी वीरगन्ज उपमहानगरपालिका-२, छपकैंयाका शैफ भनिने जहाँगिर आलम पर्सा जिल्ला न्यायाधीश विष्णुप्रसाद कोइरालाको आदेशमा धरौटी लिई तारेखमा रिहा भएका हुन् ।
२७ वषर्ीय जहाँगिरविरुद्ध वीरगन्जकै एक युवती रमा -नाम परिवर्तन) ले असार २ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सामा साइबर अपराध मुद्दाको किटानी जाहेरी दर्ता गरेकी थिइन् । ती युवतीले आफ्नो सेक्स टेपलाई जहाँगिरले इन्टरनेटका विभिन्न साइटमा राखेको तथा त्यसको सिडीसमेत बनाई बजारमा सार्वजनिक गरेको आरोप लगाएकी छिन् । गत जेठ २३ गते युट्युबलगायत विभिन्न अश्लील पोर्नसाइटमा ती युवतीसमेत सरिक सेक्सक्लिप राखिएको थियो ।
चरणबद्ध रूपमा दुई थरीका क्लिप इन्टरनेट साइटमा राखिएका थिए । तेस्रो क्लिप भने सिडीका रूपमा बजारमा आएको थियो । आगोझैं फैलिएको वीरगन्जसँग सम्बन्धित उक्त सेक्स टेप प्रकरण पछि जहाँगिर फरार भएका थिए । उनी एकैपटक अदालतमा उपस्थित भएका हुन् ।
युवतीले विवाहपूर्व आफ्नो प्रेमसम्बन्ध जहाँगिरसँग रहेको र त्यसै क्रममा उनीसँग राखिएको शारीरिक सम्बन्धको तस्बिर मोबाइलको क्यामेराबाट छायांकन गरी इन्टरनेट वेबसाइट तथा सिडीमार्फत सावर् जनिक गरिएको दाबी गरेकी छिन् । उक्त मुभीलाई जहाँगिरले एमएमएस तथा सिडी बनाई सार्वजनिक रूपमा बिक्री-वितरणसमेत गरेर आफूलाई हदैसम्मको ब्ल्याकमेलिङ गर्ने काम गरेको रमाले बताएकी छिन् । युवतीको माइती तथा घर दुवै पक्षका व्यक्तिहरूको नामै उल्लेख गरेर उक्त सेक्स प्रकरण सार्वजनिक भएपछि उनको माइती र घर दुवै पक्षले सामाजिक रूपमा ठूलो अपहेलना भोग्नुपर्‍यो । भारतमा उनको घर पक्ष आफू बस्दै आएको सहरबाट बसाइँ सरिसकेको छ ।
जहाँगिरले आफूसँग पटक-पटक शारीरिक सम्पर्क राख्न धम्की र दबाब दिएको तर आफूले नमान्दा उक्त मुभीको सिडी आफ्ना श्रीमान्को घर तथा माइतीमा पठाई आफ्नो बेइज्जती गरेको दाबी जाहेरीमा गरिएको छ । उक्त सेक्स टेप प्रकरणपछि आफ्ना बुबा पक्षघात भै हिडडुल गर्न नसकी अपाहिज भैसकेको तथा बहिनीहरू घरबाट बाहिर निस्कन नसकेको उनले आफ्नो जाहेरीमा उल्लेख गरेकी छिन् । हाल श्रीमान्ले आफूलाई बहिष्कार गरी माइतीमा छाडी गएको अवस्थामा समेत जहाँगिरले आफूलाई पटक-पटक धम्की दिइरहेको उनले आरोप लगाएकी छिन् । रमाले जहाँगिरसँग आफ्नो मित्रता एवं प्रेमसम्बन्ध एक कम्प्युटर इन्स्िटच्युटमा कम्प्युटर सिक्ने क्रममा भएको बताएकी छिन् । जहाँगिरले त्यस क्रममा आफूलाई नशालु पदार्थ ख्वाएर शारीरिक सम्पर्क राखेको तथा त्यसको तस्बिर खिचेको दाबी गरेकी छिन् । उक्त मुभी वीरगन्जकै छपकैयातिर खिचिएको हुन सक्ने उनको अनुमान छ ।
अविवाहित जहाँगिरले अदालतमा बयानका क्रममा आफूले हालसम्म रमासँग भेटघाट नगरेको र उनीसँग आफ्नो कुनै पनि खालको मित्रता तथा सम्बन्ध नरहेको बताएका छन् । रमाले जाहेरीमा आफूउपर लगाएका आरोप पूर्ण रूपले झूटो र निराधार भएको उनको जिकिर छ । जहाँगिरले आफूले कक्षा ८ सम्म मात्र पढेको र रमासँग कुनै सम्बन्ध र सरोकार नभएकाले उनी संलग्न सिडी तथा सेक्स क्लिप आफूले सार्वजनिक नगरेको जिकिर गरेका छन् ।
जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले जिल्ला अदालतमा उक्त मुद्दा प्रस्तुत गर्दै जहाँगिरले विद्युतिय -इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन २०६३ को दफा ४७-१) अनुसारको कसुर अपराध गरेकाले उनलाई हदैसम्मको सजायको माग गरेको छ । सरकारी वकिलको कार्यालयको अभियोगपत्रमा जहाँगिरले सामाजिक जातीय सद्भाव बिगार्ने, कसैप्रति घृणा वा द्वेष फैल्याउने वा विभिन्न जातजाति तथा साम्प्रदायिक सुमधुर सम्बन्ध खलल पार्ने कार्य गरेकाले उनलाई सजायको माग गरेको छ ।
न्यायाधीश कोइरालाको इजलासले थुनछेक प्रयोजनको बहसपछिको आदेशमा 'आरोपित जहाँगिर कसुरदार देखिए पनि निजलाई अदालती बन्दोबस्त ११८-२) अनुसार थुनामा राख्नुपर्ने अवस्था नदेखिएकाले पछि प्रमाण बुझ्दै जादा ठहरेबमोजिम हुने गरी निज प्रतिवादीबाट अदालती बन्दोबस्तको ११८-५) समेतको आधारमा धरौटी लिई मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने' भनी उल्लेख छ ।
रमाका कानुन व्यवसायी अधिवक्ता सुधीर कर्णले अधिराज्यमै सम्भवतः कुनै पनि न्यायिक निकायमा दर्ता गरिएको सबैभन्दा पहिलो यस्तो खालको मुद्दामा आफूले चाहेर पनि बहस पैरवी गर्न नपाएको बताए । आफू कामविशेषले हेटौंडामा रहेको र रमालाई समेत उक्त मुद्दाको पेसी बुधबार परेको कुराको जानकारी नहुँदा अत्यन्त कम समयमा अदालती कारबाही सम्पन्न भएको उनले बताए । उनले सूचना र प्रविधिको वर्तमान युगमा यस्ता खाले मुद्दामा इजलासमै भिडियो, कम्प्युटर आदि राखेर न्याय निरूपण गर्न सकिने अवस्था विद्यमान हुँदाहँुदै पनि त्यसो नगरिएको गुनासो गरे । उनले प्रहरीले यो मुद्दामा गम्भीर रूपमा अनुसन्धान गर्न सक्ने अवस्था हुँदाहँुदै पनि त्यसो नभएको बताए । आरोपी एक्लैले उक्त टेप बनाउने, एडिटिङ गर्ने र वेबसाइटमा हाल्नेसम्मको काम गर्न नसक्ने अवस्था रहेको र उक्त कार्यमा कम्तीमा तीन-चार जनाको समूह लागिपरेको निश्चित हुँदाहँुदै पनि जहाँगिर एक्लैलाई अभियुक्त बनाउनु प्रहरी अनुसन्धानमा रहेको कमजोरीको प्रमाण भएको उनको आरोप छ । प्रहरी उपरीक्षक राजेन्द्रमान श्रेष्ठ भने यो मुद्दा हालसम्मकै अत्यन्त नौलो र जटिलसमेत भएकाले प्रहरीले अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक लिएको जिकिर गर्छन् । उनले व्यापक अनुसन्धानपछि मात्र प्रहरीले सरकारी वकिलको कार्यालयमा मुद्दा पेस गरेको बताए ।
यता जिल्ला सरकारी वकिलको कायर्ालय जहाँगिरलाई धरौटीमा छाडने जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध पुनरावेदन अदालत हेटौंडामा पुनरावेदन गर्ने तयारीमा जुटेको कार्यालय स्रोतले बताएको छ । विवाहअघिको प्रेमसम्बन्ध र त्यस क्रममा भएका गतिविधिका कारण अनपेक्षित नतिजा बेहोरेकी रमा हाल बिस्तारै उक्त घटनाजनित सामाजिक अपहेलना, लाञ्छनाबाट आफूलाई सम्हाल्ने क्रममा छिन् । घरबाट बहिष्कृत भैसकेकी उनले अकल्पनीय घटना बेहोरेको र आफ्ना कारण माइती पक्ष पनि ठूलो पीडाको सिकार भएकाले आफू अत्यन्त दुःखित भएको बताएकी छिन् । यद्यपि रमाले पहाडजस्तो लामो जीवनलाई त्यत्तिकै घरमा बसेर खेर नफाल्ने मनस्थिति बनाएकी छिन् । विवाहका कारण आफ्नो उच्च शिक्षा अवरुद्ध भएकाले अब उच्च शिक्षालाई निरन्तरता दिने र स्वावलम्बी बन्न चाहेको उनी बताउँछिन्, तर यो कुरा समाजले सकारात्मक सहयोग र समर्थन गरिदिए मात्र सम्भव भएको कुरा उनलाई थाहा छ । कुनै सहृदयी संघसंस्थाले आफूलाई पुनर्जीवन दिने पहल गरे आफू त्यसका लागि तयार रहेको पनि उनको भनाइ छ । टेप प्रकरणको पात्र आफू एक्लै नभई आफूलाई बदनाम गर्ने युवक पनि उत्तिकै जिम्मेवार भएकाले पितृसत्तात्मक समाजले आफूलाई मात्र दोषी बनाइरहेको उनको गुनासो छ । समाजमा यस्ता क्रियाकलाप गर्ने पुरुष पनि उत्तिकै दोषी हुनुपर्ने र उसको सामाजिक बहिष्कार गर्न सक्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
यसअघि एक गायक तथा हास्यकलाकारको यस्तै खाले टेप सार्वजनिक हुँदा हालको ऐन बनिनसकेकाले उनलाई गाली बेइज्जती ऐनअनुसार कारबाही चलाइएको अधिवक्ता कर्ण बताउँछन् । त्यसैगरी चर्चित दुई मोडल तथा नायिका यस्तै खालका दुई फरक प्रकरणमा चर्चामा आए पनि उनीहरूले कुनै कानुनी उपचार खोजेनन् ।
वीरगन्जका लागि पनि यस्तो घटना पहिलो भने होइन । यसअघि पनि वीरगन्ज स्थानीय घर भएका एक अन्र्तराष्ट्रिय खेलाडीको भिडियो क्लिप्स सार्वजनिक भएको थियो । स्थानीय एक महिलासँगको उनको उक्त टेपले पनि आगाको झिल्कासरह चर्चा बटुलेको थियो । आधुनिकतासँगै बढ्दो साइबर अपराध यहाँका युवा पुस्ता र उनीहरूका अभिभावकका लागि पनि चिन्ताको विषय बन्दै गएको छ । फलस्वरूप साइबर अपराधसम्बन्धी कानुनलाई अझ बढी प्रभावकारी र बलियो बनाउनुपर्ने धारणा अधिकांश अभिभावकको छ ।
Posted by Prabin Jha at 8:34 AM No comments:
Labels: Nepali movies, Nepali News
Ujju with Bhuwan KC
Posted by Prabin Jha at 1:36 PM No comments:
Labels: Nepali movies, Star Talk, T.V Show, Ujju Darling
UJJU WITH BHUMIKA SHRESTHA
Posted by Prabin Jha at 1:33 PM No comments:
UJJU with RAJESH HAMAL
Posted by Prabin Jha at 1:30 PM No comments:
२० पचाउन गाह्रो हुने नेपाली फिल्मका सीनहरु
१. ठोक्किएर किताब खस्ने
दुर्घटना राजमार्गमा मात्र हुँदैन। नेपाली फिल्मको कलेजमा पनि हुन्छ। त्यहाँ हिरोहिरोइनले एकआपसमा ठक्कर खाइरहन्छन्। धेरै फिल्ममा यस्तो दुर्घटना भइसकेको छ। हिरोहिरोइन ठोक्किन्छन् र हिरो वा हिरोइनका किताब भुइँमा छरपस्टिन्छ। ‘ओह सरी’ भन्दै किताब टिप्ने काम हुन्छ। त्यतिबेला फेरि टाउको पनि ठोक्किनसक्छ।
२. हिरो हिरोइन टोलाइरहने
हिरोहिरोइन एकअर्कालाई देख्दा मुग्ध भएर टोलाउन थाल्छन्। दायाँबायाँ को-को छन् उनीहरूलाई मतलब हुँदैन। एकनाशले आँखा जुधाउँदै हराउँछन्। सँगैका साथीहरूले उनीहरूका आँखाअगाडि हत्केला हल्लाउँदा पनि ‘ध्यान’ भंग हुँदैन।
३. गाउँका हिरोइनले झरनामै नुहाउने
गाउँकी हिरोइन यति निर्धक्क हुन्छे कि नुहाउनलाई ऊ जंगलबीचको अप्ठ्यारो झरनामा पुग्छे। घरमै नुहाउन उसलाई मन लाग्दैन। किनभने त्यसो गर्दा उसको ‘जवानी’ प्रदर्शन हुँदैन। जसरी हुन्छ, सहरबाट आएको हिरोले देख्ने गरी उसलाई झरनामा गएर नुहाउनैपर्छ।
४. हिरोइनको सल हिरोको हातमा
हिरोइनको जवानीमाथि भिलेनको गिद्धेनजर पर्छ। उसले निकै प्रपञ्च रच्दै हिरोइनलाई कब्जामा लिन्छ। त्यतिबेला हिरोइनले सल भएको लुगा अनिवार्य लगाएकी हुन्छे। भिलेनले सललाई तानेर हावामा हुर्‍र्याइदिन्छ। सल हावामा तैरिँदै झर्छ र हिरोको हातमा पर्छ। त्यसपछि रामधुलाइ।
५. सुत्नअघि दूध पिउने
नेपाली हिरो त्यसै बलियो भएको होइन। ऊ सुत्नअघि नियमित दूध पिउँछ। उसलाई कि आमाले दूध पिलाउँछ कि हिरोइनले। उसले दूध सधैं पारदर्शी गिलासमा पिउँछ। हिरोइन वा आमा पात्रले पारदर्शी गिलासमा दूध लिएको दृश्य छ भने, त्यो हिरोकै लागि हो भने बुझे हुन्छ।
६. बाँकी कुरा अँध्यारोमा
हिरोहिरोइनको समागमको दृश्य देखाउन नेपाली फिल्मले पुरानै विम्ब प्रयोग गर्न छोडेको छैन। ओछ्यानमा पल्टन्छन् र बत्ती निभाउँछन्। बाँकी कुरा अँध्यारोमा। नयाँ प्रतीकात्मक दृश्य सिर्जना गर्ने जाँगर किन नपलाएको हो? बुझ्न गाह्रो छ।
७. खोलामा खस्ने, स्मृति गुम्ने
खोलामा खस्दा लास बेपत्ता हुनुपर्ने हो। तर, नेपाली फिल्ममा त्यस्तो हुँदैन। खोलामा खसेको पात्र हतपत मर्दैन, उसलाई कुनै अनजान ठाउँका मान्छेहरूले उद्धार गरिदिन्छन्। बरु, उसको स्मृति चाहिँ गुम्नसक्छ। त्यसरी गुमेको होश फिर्ता हुन डाक्टर चाहिँदैन, त्यस्तै कुनै ठूलो घटना घटे पुग्छ।
८. गाउँलेलाई बाटो काट्न समस्या
कुनै गाउँले पात्र सहर आयो भने उसलाई सबैभन्दा बढी समस्या केमा हुन्छ? नेपाली फिल्म हेर्नुस्, यसको जवाफ पाइनेछ। गाउँलेलाई सहरमा बाटो काट्न निकै समस्या हुन्छ। गाउँलेहरूकै लागि भनेर सहरमा आकाशे पुल बनाइएको हो कि जस्तो लाग्छ।
९. गरिबलाई अप्रेसन महँगो
गरिबलाई पैसा अभावले पक्कै सताउँछ। पैसा खट्टे पर्ने कारण थुप्रै हुनसक्छन्। नेपाली फिल्ममा भने अपरेसन गर्न गरिब हिरोलाई पैसा खाँचो परेको देखाइन्छ। हिरोको कोही आफन्त इमरजेन्सीमा भर्ती हुन पुग्छ र डाक्टरले हजारौं वा लाखौं रकम तुरुन्त ल्याएमात्र अप्रेसन गर्छु भन्छ।
१०. मर्ने बेला लामो संवाद बोल्ने
कुनै जटिल रोगले वा गोली लागेर घाइते भएका पात्रले सबैजना भेला भएको बेला लामो संवाद बोल्न थाल्यो भने निश्चित भए हुन्छ, ऊ मर्दैछ। अरू पात्रहरू पनि एम्बुलेन्स बोलाएर अस्पताल लैजानुको सट्टा त्यो संवाद सुनेर बस्छन्, मानौ प्राणभन्दा पनि कुरा फुत्किएला भन्ने चिन्ता उनीहरूलाई छ।
११. हातको वस्तु झर्ने
आफ्नो प्रिय व्यक्तिको मृत्यु देख्दा वा त्यसबारे सुन्दा नेपाली फिल्मका पात्रहरू शिथिल बन्नपुग्छन्। त्यतिबेला उनीहरूका हातमा भएका गिलास, किस्ती, औषधी वा पैसा सबै खस्छ। नेपाली फिल्ममा यस्तो दृश्य खिचिँदा कति सिसी फुटे, दूध पोखे वा औषधी बगे कुनै लेखाजोखा छैन।
१२. कसैको मृत्युमा प्रहरीले टोपी खोल्ने
फिल्ममा कुनै प्रिय पात्रको निधन हुँदा रुवाबासी चल्छ। वरिपरि झुम्मिएकाहरूले आ-आफ्नै पाराले प्रतिक्रिया व्यक्त गर्छन्। प्रहरीले भने अफसोच मान्दै टोपी खोल्छ। श्रद्धा गर्नुपर्ने मान्छे मर्दा प्रहरीले टोपी खोल्छ भन्ने सायद धेरै जसोले नेपाली फिल्म हेरेरै थाहा पाएका होलान्।
१३. भाँडाकुडा बाहिर फ्याल्ने
नेपाली फिल्मका ‘सामन्ती’ले ऋण असुल गर्ने तरिका अनौठो छ। भाका नाधेपछि ऊ आफ्नो दलबलसहित ऋणीको घर पुग्छ र केटाहरूलाई भाँडाकुडा बाहिर फ्याँक्न हुकुम दिन्छ। ऋणीले त्यतिबेला निकै रोइकराइ गर्छ, खुट्टा ढोग्छ। तर, उसको मन पग्लिदैन। सायद यस्तो ‘बिचल्ली’मा रमाउने आदत उसलाई लागिसकेको छ।
१४. मान्छेको विष बिरालोलाई
विष खुवाएर हिरोलाई मार्नु छ भने फिल्ममा दूधकै सहारा लिइन्छ। षड्यन्त्रकारीले खुसुक्क दूधमा विष मिसाइदिन्छ। तर, हिरोको भाग्य कति दह्रो हुन्छ भने त्यस्तो दूध कसोकसो गरी भुइँमा पोखिनपुग्छ। र, अचानक बिरालो आएर खाइदिन्छ। मान्छेको विष बिरालोले खाएको दृश्य कस्तो हुन्छ, नेपाली फिल्म खोजीखोजी हेर्नुहोला।
१५. गोप्य कुरा सुन्ने
सासु र नन्द मिलेर षड्यन्त्र बुन्दै गरेको बुहारीले सुन्छे। एउटा पात्र क्यान्सर रोगी हुन्छ र उसको केही महिनापछि मृत्यु निश्चित छ। तर, यो कुरा उसलाई कसैले भन्दैन। अरूले अर्कै कोठामा कुरा गर्दा उसले सुन्न पुग्छ। यसरी सुन्न नहुने वा सुनाउन नखोजिएको कुरा नेपाली फिल्मका पात्रहरूले सुटुक्क सुनिहाल्छ।
हिरोलाई आफ्नो मुठ्ठीमा ल्याउन भिलेनले प्रयोग गर्ने अन्तिम उपाय हो, अपहरण। हिरोइन वा हिरोका परिवारलाई अपहरण गरी आफ्नो अखडामा बाँधिदिएपछि हिरो जसरी पनि आइपुग्छ भन्ने विश्वास भिलेनको हुन्छ। नभन्दै हिरो निरीह बन्दै आइपुग्छ। समाजमा भन्दा बढी अपहरण हुन्छ नेपाली फिल्ममा।
१७. भिलेन आफैले कुरा ओकल्ने
हिरोलाई कसैको हत्याको गलत आरोप लागेको हुन्छ। हिरोइनलाई पनि चोरीको आरोप लाग्छ। हिरोको बुबालाई कसले हत्या गरेको हो, थाहा हुँदैन। यो कुराले हिरोलाई पनि आपत परेको हुन्छ। तर, अन्तिममा हिरोलाई भिलेनले नै आरोपमुक्त बनाइदिन्छ। हिरोको सबै खान्दान खत्तम हुने भो भन्दै उसले सबैका अगाडि आफ्नो अपराध एकपछि अर्को गर्दै ओकलिदिन्छ।
१८. फाइटमा नारी पात्र बेहोश हुने
हिरो र भिलेन पक्षबीच फाइट भइरहँदा निर्देशकलाई हिरोइन र अरू नारी पात्र झन्झट हुनपुग्छ। यो झन्झटबाट मुक्त हुने तरिका पनि उनीहरूले जानेका छन्। भिलेनसँग झागलझुगल हुँदा हुत्तिएर ढुंगा वा भित्तामा ठोक्काई बेहोश बनाइदिने। त्यसरी बेहोश भएका नारी पात्रहरू फाइट सिद्धिएपछि मात्र ब्युँझिन्छे।
१९. अरूको गोली आफ्नो छातीमा थाप्ने
कुनै पात्र मर्नु छ वा पश्चातापको आगोमा जलेको छ भने उसको मृत्यु बडो नाटकीय हुन्छ। हिरो, हिरोइन वा अरू कुनै महत्वपूर्ण पात्रमाथि प्रहार गरिएको गोली आफ्नो छातीमा थाप्दै उसले मृत्युवरण गर्छ। त्रिकोणात्मक प्रेमकथा भयो भने एउटा जगेडा पात्र हिरो होस् वा हिरोइन, उसको नियति यस्तै हुने सम्भावना बढी छ।
२०. सबै सिद्धिएपछि प्रहरी
हिरो र भिलेनबीच भीषण लडाइँ हुन्छ। दुवै पक्षका थुप्रै पात्रको निधन हुन्छ। अन्तिममा हिरोले मुख्य भिलेनलाई मार्न लागेको बेला प्रहरी आइपुग्छ। भुइँमा लडेका ‘भुसतिघ्रे’हरू र भिलेनलाई पत्रे्कर लैजान्छ। प्रहरीमाथि जनविश्वास घट्नुको कारण फिल्मको यही पाराले पनि हो कि!
Posted by Prabin Jha at 10:20 AM No comments:
Labels: Nepali movies